Malcolm X, Önwa àtó nke 1964
Mgbe ha mùrà yá:
Ébé ha mùrù yá:
Mgbe ȯ nwürü:
February 21, 1965 (afọr 39)
Ébé ȯ nwürü:
Black nationalism, Africa-Nílé
Ọtú ndi ukwu:
Onyé rúbelé ua íshí
Isi ndụ ya
Há mụrụ Malcolm Little mgbe Önwa ise 19 na afọ̀ 1925 na Omaha, Nebraska. Ńnà yá mgbe áhu bu Earl Little, na mmá ya bu Louise Little (áhà nna yá Lousie Norton). Ńnà ya kwuru na ñkịtị nke ndi Baptist. O kwàdọrọ onye Africa-Nílé Marcus Garvey na ȯ bu mgbe áhù onye íshí Universal Negro Improvement Association (UNIA). Malcolm échéfụghị óbị màkà nga nga ojié na nkwádọ onwé ńnà yá na ndi UNIA ọ̀zọ lìlì òlìlì. Malcolm X na ógè gáfèrè sị na ímé nwanne Nwoke di ntà nke Earl di àtó, ndi ocha gbùrù ya na ùdò. Màkà ndi Ku Klux Klan lùrù ha ozi ojö, ọnụma ya jéfwụrụ Í ga Milwaukee, Wisconsin na afọ̀ 1926, na ógè nsó ha gàkwàrà Lansing, Michigan.
Earl Little bu onyé nwéré àhu jírí njí na há mùrù ya na Georgia. Ọ nwèrè mgbe áhụ úmù àtó shí nwínyè yá nke mbu: Ella, Mary, na Earl Jr.; na ȯ nwèrè asaa shí nwínyè ȯ lùrù nke búrú abụọ, Louise, ọ bu nke Malcolm byàrà nke ànó: Wilfred, Hilda, Philbert, Malcolm, Reginald, Yvonne, na Wesley.
Louise Little shì Grenada ébé ha mùrù yá. Máká ńnà ya bu onye Scotland, o nwèrè àhú dí ọchá, cháfu rü nke ȯ nwèríkí gá kà onye óchá. Malcolm nwètèrè àhú óchá ya shí mmá ya na nnà mmá ya. nà mbu, àhú òchá ya bu ihé vúrú íshí Malcolm màkà ó chè sị nà ó bụ ihe ndí ukwu, ma mgbe ógè gáfèrè ọ sị ótù mgbe na o "kpọrọ asị ọbạrạ nílé nọr na ya na àhú shí onye mmebuó nwanyì nke onye ọchá." Malcolm X chéfùtàrà na mgbe ógè gáfèrè na ńnà ya hùchara ya ányá kárírí úmù ya ndi nke ọ̀zọ màkà àhú ya di ȯchá kárírí úmù nọr na umunna ya; mànà o chè sị mmá ya megbụrụ yá màkà ótù ihe nke kwa. Otù áhà ha túrú ya, "Red" (ūfie), shì àgwà zírí nke na ntùtù ya. Nke ótù ọdé ndu mádu si bụ na mgbe há mùrù ya, o nwèrè "ntùtù chárá ka ánwú chákwá ntụ ntụ ... chákwá ka cinnamon", na afọ̀ ànó, "ntùtù chárá ka ánwú, ūfie dítúrú". Ntùtù ya gàrà ojié mgbe ó tòrò, mànà o yị kwàrà mmá nnà ya, onye ntùtù ya "chàrà ūfie, ūfie na ánwú summer." Okwu gbásárá àgwà àhú ya bịdọrọ Í di kwá mkpà na ndu Malcolm mgbe ó tòchàrà.
Mgbe ha làchàrà Í ga Lansing, úlò ha gbàrà ökü ruó na àlà na afọ̀ 1929, mànà umunna ha háfùrù me ọ díghì ihe méré ótù ha. Na Önwa itoolu 28, nke 1931, Earl Little dàrà nwüo na ihū ụgbo àlà na Lansing na okúrù uzọr. Ndi íshí mèrè önwu ya ka ihe mbèlèdè. Ndi nche obodo kwùrù na Earl Little nwèkwàrà íshí ya mgbe ọ gàrà ébé áhù, na ha sị ọ sị na ọ dànarị ímé mgbùrù mgbúrù ugbo àlà áhù. Malcolm X na óge gáfèrè chètàrà na ȯgbà ndi ojié sèrè okwu sí na ọ bi ihe öjö mádu mèrè ya. Ndi Black Region, ndi nnwétérí ndi ọchá na élú kàgburu ndi Umunna ya, ọ bu ndi á ńnà ya sị gbàrà úlò ha ökü na afọ̀ 1929. Ọ di ndi ojié chéré si ọ bu ọtú Black Legion gbùrù Earl Little. Na nke Malcolm dèrè na mgbe ógè gáfèrè, "Òtù ólé ka ńnà m gí suó íshí ya, sekpù na ónú ugbo àlà ka ugbó nírí ya na élú?"
Wefụtàrà ya shí https://ig.bywiki.com/w/index.php?title=Malcolm_X&oldid=61984
Há rüchàrà na ihü nka na 10 Ọnwaìse 2018, mgbe 21:20